"Marwo' Zamzam Cabdi Adam, Waa Dabayl Caafimaad Oo Ilaahay Somaliland U Soo Diray"Af-hayeenka W/ Waxbarashada Iyo Tacliinta Sare Ee Somaliland | Dhamays Media Group
“Marwo’ Zamzam Cabdi Adam, Waa Dabayl Caafimaad Oo Ilaahay Somaliland U Soo Diray”Af-hayeenka W/ Waxbarashada Iyo Tacliinta Sare Ee Somaliland
Cabdilaahi Ibraahim Xaaji Xasan Af-hayeenka Wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare ee somaliland ayaa Gaashaanka Ku Dhuftay Dacaayado Raqiisa Oo Xisbiga Wadani U soo Jeediyeen Wasiirka Maaliyada Marwo Zamzam Cabdi Adam.
Cabdilaahi Ibraahin Xaaji Xasan ayaa soo saaray qoraal dheer oo uu kaga hadlay wasiirka maaliyada somaliland kaas oo uu ciwaan uga dhigay “Marwo ZamZam Cabdi Aadan Dun Xariir Ah Iyo Dabayl Caafimaad Oo Somaliland Deeqday”, qoraalkaas oo u dhignaa sidan:-
“Hablo talada goyn kara
Gobannimana hanan kara
Geyi kale ma joogaan!”
Maalmihii u dambeeyay waxa saxaafadda ku soo noqnoqonayay dad siyaalo kala duwan tafsiir uga bixinayay hadal ay dhowaan marwo Samsam Cabdi Aadan ka jeedisay magaalada Burco. In badan oo dadkaa ka mid ah markii aan hadalladooda dhuuxay waxa ii muuqatay inaanay aqoon shakhsi ah badidoodu u lahayn Wasiir Samsam. Halkan waxaan doonayaa inaan ku iftiimiyo aqoonta shakhsiga ah ee aan u leeyahay marwo Samsam.
In muddo ah ayaannu ka wada mid ahayn kaadirkii Xisbiga Kulmiye. Waxay ahayd halgamaa haladag. Waxay ka mid ahayd xubnihii halganka dheer u soo galay, ee naf iyo maal ba u huray sidii uu Madaxweyne Siilaanyo u fuuli lahaa kursiga ugu sarreeya dalka.
Saamaynta culus ee ay Samsam ku lahayd saaxaddii mucaaradka Somaliland waxaad ka garan kartaa sidii loo beegsanayay ee ay bartilmaameedka ugu ahayd xukuumaddii wakhtigaa jirtay, ilaa aakhirkii albaabbada loo laabay ururkeedii SHURO NET. Waxa ka tirsanaa xukuumaddaa oo ay jifo hoose isku ahaayeen Wasiirka arrimaha gudaha iyo badhasaabka gobolka Hargeysa, kuwaas oo dhammaantoodba ku hawlanaa sidii ay marwo Samsam dhufayska uga saari lahaayeen, laakiin taasi marnaba kama ay duwin himiladeedii ahayd in dalka isbeddal la mahadiyaa ka hirgalo. Sidaas si la mid ah, wakhtigan xaadirka ah cid kasta oo Samsam hadalhaynteeda ku mashquushaa wax saamayn ah kuma yeelan karaan habsami u socodka hawlaheeda.
Markii ay Xukuumaddu talada dalka la wareegtay waxa loo magacaabay Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Somaliland oo lagu tilmaamo wasaaradaha ugu shaqada badan ee dalka. Wakhtigaa waxa aan macallin ka ahaa Wasaaradda Waxbarashada aniga oo muddo afar sanno iyo badh ah oo ay Wasaaraddan hoggaaminaysay si dhow ula soo shaqeeyay. Wasaaradda waxbarashada waxay ku wadday dul, dad-isku-wad, diblomaasiyad, maamul-wanaag, iyo dareen feegigan oo garasho, dadnimo iyo dadnimo ku dheehan tahay. Goob kasta oo dalka ka mid ah oo aan hore dugsiyo uga jirin waxay ka hirgalisay adeegyo waxbarasho. Muddadii ay xilka haysay waxa kordhay tirada macallimiinta iyo tirada ardayda. Macallimiintii waaweynayd ee dalka u soo shaqaynaysay muddada dheer ayay markii ugu horraysay siisay xuquuq aan qasnadda qaranka iyo tan dawladda midna laga soo saarin. Mabda’eedu waxa uu ahaa Somaliland oo horumar gaadha iyo qarannimada Somaliland oo taabbagasha. Taa waxa kuu muujinaya munaasibaddii ay xilka Wasaaradda waxbarashada ku wareejinaysay iyo saamayntii ay shaqaalaha wasaaraddaa ku lahayd.
Waxay wareejisay wasaarad rejo, ulasho iyo himilo wanaagsan leh. Muddadaa ay wasaaradda joogtay laguma arag eex, qaraabo-kiil iyo wax la mid ah, xataa lagagama caban. Taasi waxay keentay xusuusta aan duugoobin ee ay ilaa maanta ku leedahay shaqaale-weynaha Wasaaradda Waxbarashada.
Samsam maanta waa Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda, waana markii ugu horraysay ee qof dumar ahi xilkaa qabato. Samsam waxaan u aqaannaa qof qarannimadu ku weyn tahay oo qabiilka ka madhan. Haddii Samsam ay tahay qof taab gaaban ama qolo nacayb, qolo jacayl iyo curfi qabiil ku beeran yahay halkaa may soo gaadheen. Taasi waxay muujinaysaa inay tahay qof hawlkar ah, hal-adag, isla markaasna daacad u ah dalka, dadka iyo dawladda intaba.
Arrinta Burco ee ay ka hadashay na, haddii la dhibsaday iyo haddii la soo dhoweeyay ba, waxay u hadashay sidii aan u aqaannay, waayo, waa qof had iyo jeer ka badheedha waxa ay aaminsan tahay oo aan marnaba qarinnin. Haddii ay gaashaanbuuraysi siyaasadeed oo beelaysan ka hadashayna, been maaha in beesha Samsam ay naf iyo maalba u hurtay in Madaxweyne Siilaanyo talada haaneedo. Sidoo kale ceebi kuma jirto haddii ay maanta beesha Madaxweynaha ku tidhaahdo xilka madaxtinnimo nagu taageera.
Aniga oo aan ka gudbayn xuduudkii Madaxweynaha qaranku u dhigay shaqaale-weynaha dawladda ee ahaa inay dhex ka ahaadaan arrimaha xisbiyada, haddana, marka aan hadalkii Samsam ee Burco fahamkayga ku eego, waxaan u fahmay: ma jirin qof keli ah oo ka mid ah beelaha Somaliland dega oo Axmed-Siilaanyo lagu ballamiyay, sidaas si la mid ah ayay muhiim u tahay in aan Muuse Biixi na loogu ballamin, maadaama oo uu yahay Mujaahid mudan in la qiimeeyo. Beytal-qasiidka hadalkeeda sidaas ayaan u fahmay.
Dhammaanteen hal reer ayaynnu nahay. Waxaynnu nahay reer Somaliland. Sidaa darteed ma mudna in hadal qof yidhi laga dhex baadhno naxli, buqdi, iyo xiqdi. Sidoo kale maaha inaynnu habeen walba Tv-yada isla soo taagto hadallo cunfi ah oo aan adduun iyo aakhiro midna waxtar lahayn.
Ugu dambayn, Wasiir Samsam waxaan leeyahay hankaagii iyo himiladaadii wanaagsanayd halkii ka sii wad, hana dhegaysan hadallada makasta iyo dhengagaalaha. Waxaan ku soo afmeerayaa qormadan tuducyo ka mid ah tixda Daahyaley ee Abwaan Hadraawi.
Hadduu doogga cawskiyo
Dareemada ka badan yahay
Adiguna dab baad tahay.
Damal adag hadduu yahay
Adna danab dhacaad tahay.
Dubbe culus hadduu yahay
Derbi soo ceshaad tahay.
Mugdi lagu dayoobiyo
Gudcur dama’ hadduu yahay
Qorrax duluca furatiyo
Dayax buuxsamaad tahay.
Hadduu aw dillaaliyo
Qalin duurre faashiyo
Yahay fiqi dammiinana
Cilmi durugsan baad tahay.
Dulin dhiigga miirtiyo
Dulmi hilan hadduu yahay
Xaq dillaacay baad tahay.
Nin qabiil dafkiisiyo
Ku dan qaba hadduu yahay
Qaran dawladaad tahay.
Inta dunidu raarkiyo
Deyrka hoose leedahay
Qof dulmani ku nool yahay
Ilays daaran baad tahay.”
Cabdillaahi Ibraahin Xaaji Xasan
Previous: Wasiirkii Hore Ee Wasaarada Dhalinyarada Iyo Ciyaaraha Somaliland Oo Ka Hadlay Xil Ka Qaadistiisa
Next: Mid Ka Mida Maraakiibta Dagaalka Oo Dekada Berbera Ku Soo Xidhay Iyo Sababta + Muuqaal